Huawei FreeBuds 4, iyo kunatsiridzwa kwechinhu chakakwana chigadzirwa [Ongororo] | Gadget nhau
Huawei FreeBuds 4, iyo kunatsiridzwa kwechinhu chinenge chakakwana chigadzirwa [Ongororo]
MuActualidad Gadget tinokuunzira chigadzirwa zvakarekodhwa, iwe unotoziva kare kuti tinoda kukuchengetedza iwe neruzivo nenhau mumatanho ese, uye Huawei ndomumwe wevagadziri vanopa dzimwe nzira dzakasiyana mumatanho emitengo akasiyana. Kutevera kubudirira kweFreeBuds 3, Huawei anonatsa iyo modhi uye anoita kuti ive yakakwana.
Tsvaga pamwe nesu iyo nyowani yeHuawei FreeBuds 4, iyo nyowani TWS mahedhifoni ane yakasimba kwazvo inoshanda ruzha kukanzurwa. Isu tinoongorora zvese zvahunhu, kugona uye kushaya simba mune ino yakadzama ongororo, urikupotsa here? Tine chokwadi chechokwadi kuti aiwa, batana nesu mukuongorora kutsva uku.
Kana iwe ukatarisa kuburikidza nemazana emawongorori iwe uchaona kuti vazhinji vaongorori vanobvumirana kuti idzi Huawei MaharaBudhi 4 Ndiwo akanakisa-emhando yepamusoro mahedhifoni pamusika patinotaura kunyanya nezve akavhurika mahedhifoni, asi isu tinoda kukupa iwe pfungwa yedu, uye nekuda kweizvi isu tinofanirwa kuvaedza zvakadzama… Handei!
Wakavada here? Vatenge nekutora kusvika pamakumi maviri muzana paAmazon.
1 Ode kuvhura-dhizaini mahedhifoni
3 Ruzha uye kurekodha mhando "hache-dé".
4 Kuzvimiririra uye maonero emupepeti
Ode kuvhura-dhizaini mahedhifoni
Iwo ma-nzeve ma-nzeve akanaka kwazvo, iwo akanaka zvakanyanya kana iwe usingaadonhedze, kunyanya kana iwe uine imwe yeaya mashoma nzeve ayo mainjiniya ekugadzira emakambani anoita kunge anofunga paanogadzira maTWS mahedhifoni, iwo akanyanya kunaka yekuita yemhando inoshanda ruzha kukanzura. Huawei afunga nezvevaya vese vashandisi vane ruvengo kuma-nzeve mahedhifoni nekuda kwekuti vatidonhedze kana kutikuvadza, uye vafunga kutisvika nekwakashanda ruzha kukanzura neaya Huawei FreeBuds 4, inenge yakafanana neHuawei FreeBuds 3 mukugadzirwa, uye iyo yandinofungisisa nemoyo wese senge yangu yega sarudzo. Kunyangwe izvi, muPodcast yatinoita takabatana pamwe neActualidad iPhone iwe unenge wakwanisa kucherechedza kuti ndanga ndichishandisa iyo Huawei FreeBuds 4i kwemwedzi, zvipingamupinyi zveramangwana (Ndingadai ndisina kumbopa yangu Huawei FreeBuds 3).
Mavara aripo: Chena uye sirivheri
Silicone maoko: Girinhi, orenji, bhuruu uye nhema
Nehunhu hwavo "hwakavhurika" dhizaini, aya maFreeBuds 3 anogara panzeve, asingadonhe, asingakuregedze, pasina kukukanganisa. Isu tine hupamhi pane imwe nzeve ye41,4 x 16,8 x 18,5 mm yemagiramu mana chete, nepo kesi yekuchaja, iyo yakachinjika kuita saizi yakati svikei pane vhezheni yapfuura, inogara pa58 x 21,2 mamirimita e38 gramu (isina chinhu).
Mhedzisiro yacho isingaenzaniswi nyaradzo mumahedhifoni, uye dhizaini mubhokisi inoita kuti ive shamwari yeavo vanonamirwa bhurugwa ratinopfeka nhasi, hazvinetse, zvinoshandiswa nyore neruoko rumwe uye hunhu hwekuvaka, senguva dzose muHuawei, hwakanyanya kunaka.
Ndakakuudza zvakawanda, uye handina kana chandakataura kwauri. Kune vemberi vekirasi isu tichaenda kupa akateedzana einonakidza dhata, ngatitaurei nezvehunyanzvi hunhu. Tine Bluetooth 5.2, Huawei yakazvipira kune yazvino vhezheni inowanikwa pamusika kudzora latency uye kugadzirisa kubatana. Kufanana nemamwe ese maFreeBuds zvishandiso isu isu tinomiririra nekuvhura pop-kumusoro, ndokuti, otomatiki kuwiriranisa neHuawei zvishandiso (EMUI 10 kana kumusoro), isu tinofungidzira izvozvo neyakaganhurirwa NFC chip.
Tine 14,3 millimeter mutyairi yeyuniti yega yega inovimbisa yakakwira tsananguro kurira, nzeve imwe neimwe ine mota yayo kuburitsa kuzungunusa kwakanyanya mudhayaphiramu, izvi zvinoshandura kuita mabass anozopenya vanofarira mimhanzi vekutengesa, gare gare tichataura zvakawanda nezverudzi urwu ruzha. Iyo frequency renji, nekuda kwemutongi - LCP inosvika ku40 kHz, saka matanda uye manotsi akakwirira anosimbiswa.
Ruzha uye kurekodha mhando "hache-dé".
Hunhu hwaro hwekurira hahupokanwe, isu tinazvo kunyanya kusimbiswa mabhasi (mabhasi) Uye ivo vanoda mimhanzi isingatengese yekutengesa vachakwanisa kuve nayo kuburikidza neHuawei's AI Life application, inowanikwa kune vese Android neIOS. Tine mamwe epamusoro uye epakati manotsi ezvakanakisa isu taravira kusvika zvino, kunyanya mumahedhifoni akavhurika, uko inogona kukanganiswa nenzwi riri mukati kana kukanganisa. Huawei akapeta chiuno neiyo odhiyo mhando yeaya mahedhifoni kana tichifunga kuti "akavhurika", chimwe chinhu chisingakoshese munhu wese.
Sezvo Huawei isingade kusiya kumashure vashandisi vanoramba ma-nzeve mahedhifoni, yafunga kuramba ichishanda mune imwe niche iyo mamwe marangi mazhinji akange atoisiya zvakananga, zvichitipa ANC 2.0 iyo inovimbisa inosvika ku25db yekudzima ruzha pasina kukosha kwekuisa rinogumbura rabha munzeve dzedu. Nzeve imwe neimwe payakasiyana, ma sensors nemaikorofoni eFreeBuds 4 ichaongorora uye nekupa akateedzana gadziriso inobvumidza yakakwana ruzha kukanzurwa.
Zvakaoma kana zvisingaiti kuziva kana zvinyatso kuvimbiswa izvi panguva imwe chete, chinhu chega chatinogona kutonga kukanzura ruzha, uye ndinosimbisa ndisingatyi kukanganisa kuti ndizvo akanakisa akamboshongedzerwa mu 'open' headset, nemusiyano wakawanda. Ini handitomboona kupindirana neiyo odhiyo mhando uye kudzimiswa kunopfuura kukwana kwekushandisa kwemazuva ese.
Ivo zvakare vane 48 kHz HD kurekodha nekuda kwemaitiro maviri ekugadzirisa:
Zvakatipoteredza: Ndichatora manzwi akakukomberedza mu stereo
Manzwi: Iine izwi frequency kucherechedzwa, ichagadzirisa misiyano uye ndokusiya nharaunda kumashure
Zvakaoma kutsanangura Ndinokurudzira kuti utarise vhidhiyo yeAroidsis matiri kuita bvunzo yakanaka yemakrofoni. Unogona kuzvitenga pamutengo wakanakisa uye pasina mutengo wekutumira, usakanganwa.
Kuzvimiririra uye maonero emupepeti
Tine kuzvitonga kuzere kwemaawa mana pamahedhifoni neANC yakadzimwa uye Maawa 2,5 neANC iri. Nenyaya yacho yazara zvizere tichasvika na22 pm tisina ANC uye na14 pm neANC set. Miedzo yedu yauya padyo padyo padhuze nekuzvitonga kunopihwa naHuawei, iyo inovimbisa 2,5 maawa ekutamba nemaminetsi gumi nemashanu chete. Zviripachena, isu tine waya isina waya (kana tikabhadhara yakawedzera makumi maeuro ...).
Nenzira iyi, iyo Huawei FreeBuds 4 inoonekwa seimwe yeakanakisa (kubva pane yangu maonero akanakisa) sarudzo yeakavhurika TWS mahedhifoni nekuda kwehunhu, kugadzira uye kuenderana. Ivo vari kutengeswa paAmazon, unogona kuzvitenga kubva ku119 euros (149 euros yakajairwa mutengo), pamwe newebhusaiti yepamutemo ye Huawei.
Yakatumirwa pa: 18 August 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 8 September we2021
Zvishandiso, dhizaini, nyaradzo uye kugadzira
Bhokisi racho rinokwenudzwa nyore nyore
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Huawei FreeBuds 4, iyo kunatsiridzwa kwechinhu chinenge chakakwana chigadzirwa [Ongororo]
SPC Smartee Boost, smartwatch pamutengo unonzwisisika